Fitohizan'ny hafatra : Aza mivilivily hevitra rehefa tsy mahita alahatra ...
Pejy: Voalohany < 3 4 5 6 >
Miharena - 07/11/2017 20:40
Aza mivilivily hevitra rehefa tsy mahita alahatra intsony hoy aho. Tohizo aloha ilay laha-kevitra etsy ambony, vakio tsara dia avereno dia apetraho hoe misy tokony hiviliany amin'ny resaka hoe misy teny hoe Krsitianina ve ao anaty Baiboly!!
Raha tsy manohy ilay laha-kevitra ka lazaina hoe mivika dia hikadradringana indray ve sanatria!?
Raha mbola misy mananatra Rhaj0 sy Endriny dia mba mandraisa lesona fa efa manomboka tafahoatra ilay fitazonana saim-pantatra tsy mandeha amin'ny laoniny ataonareo eto matetika e!
rhaj0 - 07/11/2017 20:50
mouah ha ha... nivadika ny pejy, f'aleo averina indray ity fa tsy ataoko afa-bela eto i Miharena ee...
rhaj0 hi hi hi.. TSY MAHAY BAIBOLY i MIHARENA. Anarany fotsiny miondana Bbaiboly lava ao, nefa kay TSY mahay akoriny. Nefa raha ny Bokin'i Harry Potter no iondanan'i Miharena ao, dia efa hainy hoe chapitre aiza ny tantara iray.
Henatra beuh ho anao ry Miharena. Andrasanao izaho ve no hamoaka eto io tantara io??
TSotrabe nefa ny fangatahana teo, ary dia averina, amena chance indray ianao Miharena izany:
AIZA misy teny "Kristiana" ao anaty Baiboly, toko sy andininy firy?
Tena défier-ko azany ianao ry Miharena. Tena TSY hainao hoe @ chapitre aiza io teny io. Raha mahay (Baiboly) ianao ry Miharena dia aboahy eto. Faingàna fa voninahitr'Andtrmna no en jeu
rhaj0 - 07/11/2017 20:55
hi hi hi... rehefa tsy mahay ry Miharena dia hanontanio Ineny Gogola aa... Izany no alehany rehefa tsy mba misokatra @ maoderina fa mihidy lava ao anaty lavaka box-kely ao.
Ka nanontaniako Ineny Gogola, dia hoz'izy:
Jjeeeerreeeooo aaooo aamminn'i Aaasssaaa, iirrraiikambbiinniffollo ssassanny lattsssakkaa ddiimmyyy eee....
Dia hazavao kely azany hoe io toko io ry Miharena? Hazavao sahala @ fananonao ao ambony alitara ao. Ho hita eto raha mba tena mahay mitori-teny izao Miharena izao.
Défi io ee.. ary tandremo mipentsompentsona @ tsisy dikany eo ho'a fa voninahitr'Andrmntra no en jeu an...
Miharena - 07/11/2017 21:03
Rehefa ilazana hoe poakaty ilay fanontaniana dia tsy tokony hovaliana.
rhaj0 - 07/11/2017 21:20
resaka "poakaty" hono, hozy i Miharena, izany resaka "Kristiana ao anaty Baiboly" izany ry namana isany aa...
izaho indray ve hi-contredire anao an'izany re ry Miharena
Miharena - 08/11/2017 06:49
Tsy voasoratra ao anaty Baiboly ny teny hoe Kristianina fa famaritana ny olona mpanaradia an'i Jesoa Kristy io.
Ny olanareo anie dia mitady hirika hanakianana eto hatrany fa tsy mijery tsotra ny zavatra ambara.
Dia mba mahaiza tsotra aloha vao manohy resaka hijerena hoe olona mazava saina sa???...
endriny - 08/11/2017 07:59
Lany Lainga indray ny Havana Miharena dia any amin'ny resaka adala sy tsy misy saina Ary poakaty sisa no mba ambetin-teniny.
Asio an'ilay Torah Malagasy indray aloha e
rhaj0 - 08/11/2017 14:01
rhaj0 Ka nanontaniako Ineny Gogola, dia hoz'izy:
Miharena Tsy voasoratra ao anaty Baiboly ny teny hoe Kristianina ...
efa mba amena sopapa dia mbola mizihitra vendranabe ihany ry Miharena.
Ndana jereo ao @ Asa 11:26
Ka herintaona maninjitra no nanaovany fivoriana tao amin'io Eglizy io, ary vahoaka betsaka no nampianariny. Tao Antiokia koa no voalohany nandraisan'ny mpianatra ny anarana hoe: Kristianina
Sa TSY Baiboly ny Asa fa resa-kehy?
Eny ho'a ee... izaho indray ve hi-contredire anao ry Miharena
rhaj0 - 08/11/2017 19:44
hi hi hi.. aza milentika any ry Miharena aa... Asivo hiomilitiha sy honeteteha ho'a izy io rahefa toa io ee... asa ho'a mba ahoana mihintsy no nitaizan'i Jesosy anareo ry Miharena.
Dia mihevera-tena ry Miharena fa dia io tantara kely io, nanoratan'ny Baiboly ny teny hoe Kristiana, dia TSY hainao hoe ao anatin'ity boky tonta, nefa efa ondananao ao foana ity izy.
Zahay izao ohatra, fony zatovo, rahefa mifampi-passe ireny SAS ireny, dia tonga dia hay tsianjery hoe, ao @ pejy 103 ilay revy eee...
Ka tena hoe, asa ahoana mihintsy ny famakinao Baiboly ao re ry Miharena.. ngo dia tsy miala ao anaty patalohanao kosany ny tananao re ry Miharena? mamaky Baiboly hono i Miharena, nefa ilaozany manao matsirobasio (intelektoaly)..
Fa aza milentika any ry Miharena fa mampatahotra ee... Ngo dia menatsabe @ Jesosy ao i Miharena, dia lasa mitonantonana manao auto-mutilation na auto-flagellation, na koa manakapokapoka ny loha @ mur des lamentations.
TSY AO ANATY BAIBOLY koa ireo fa ngo dia maradratra @ n'a pas ao eee...
Miharena - 09/11/2017 12:55
Mihomehy irery aho Rhaj0 mijery ilay famalianao azy.
Izay mihitsy no notakiana taminao, dia ny namakianao ilay Baiboly ka namoahanao io andininy io.
Ny ahy moa dia tsy nisy io ilay mba Baiboly nataoko sarika avy tamin'ny aterineto izay mba fakako andininy adika eto ireny. Efa tena lahatra nataon'i Jesoa mihitsy angamba ny tsy nisian'io teny io tao anatin'ilay Biblemalagasy-ko ka io nampanoratana an'i Rhaj0 io ny famenon'ilay teny tao. Izao aho izao vao nanampy an'ilay izy vao teo.
Efa miasa mangina Jesoa aminao Rhaj0 a!
Izay fahatsoram-po izay no andrasana mba hisian'ny rindran-kevitra mety kokoa e!
Na izany aza dia asiana teny kely ihany ilay hoe boky tonta.
Raha boky tonta io tsy ahitanao taratra ny fiananao ankehitriny izay feno faharatsiana izay mahakasika anao ihany koa. Ka halalino ihany mba hahafantaranao ny marina Rhaj0 a!
Efa fanombohana izao dia mba tohizo amim-pahatsoram-po e!
rhaj0 - 09/11/2017 14:26
ka vendrana beuh azany ve k'lou ianao ry Miharena sa tsy vendrana beuh, ary (mahay) mamaky Baiboly sa tsia, no be-wa-wa-wa (avy eny ambony alitara) teo, ka hoe:
Tena mba asio hiomilitiha sy honetetiha ho'a ilay izy ry Miharena aa.. hotry ny vao mainka ampianao lalalalala lavabe ilay izy k'nouh...
Fa tsara fa tohizo ity toetranao ry Miharena aa... Izaho indray ve hanakana anao tsy hanao izany.. ho @ "voninahitr'Atra" hono, hoz'enao izay.
Miharena - 09/11/2017 19:35
Ka ianao anie no valiana Rhaj0 araka ny fombanao aloha sao dia mba mifoha ihany koa e!
Efa tsara raha mahatsapa fa manao lalala lavabe ny mamaly anao eto satria ianao no manao izany voalohany eto aloha.
Dia mba asio fahatsorana hoy aho teo ary raiso ilay Tenin'Andriamanitra sy ny Asany fa aza atao toa an'io fanaonao io hatrany.
Ary ny tena loza aza dia lavinao ilay Boky nefa ianao avy eo milaza fa misy io soratra io ao. Ka inona no tiana hahatongavana?! Raha fihatsaram-belatsihy dia lazao tsara koa fa indraindray tsy fantatra ny tiana hahatongavana amin'ny fanontaniana. Indraindray fanontaniana bontolo tsy mitondra mankaiza marina.
rhaj0 - 09/11/2017 19:44
Miharena Ary ny tena loza aza dia lavinao ilay Boky nefa ianao avy eo milaza fa misy io soratra io ao. Ka inona no tiana hahatongavana?!
Efa novaliana teto ity eee... (ahoanoa mihintsy azany ny famakian-dry Miharena serasera.. raha TSY (mahay) mamaky Baiboly ry Miharena dia ekeko ihany, satria mibilobiloka be ilay izy, fa ny serasera ee.. Tsiky (fotsiny) dia ampy..
Fa ny tiana ahatongavana, dia efa hoe, io ilay hoe:
asaina mihinana ny dozin'ny fanafodinareo (fôsika) ihany ianareo eee...
(give you a taste of your own medicine).
Miharena - 09/11/2017 19:55
Tsy mamely ilay valin-teny fa miteniteny foana tsy misy vontoatiny loatra.
Mba ataovy matotra ny tianao hahatongavana fa tsy misy lalany mihitsy hoy aho!
Hazavazavao sy velabelaro fa aza manao firesaky ny maizin-tsaina aloha e!
endriny - 10/11/2017 07:12
MIteniteny foana hono. Ihihihihihi
Ohatran'ilay hoe misy olona be dia be nosaforan'ny vazaha rano ao Mantasoa ve?
Sa hoe: "Izaho mihintsy ny vavolom-belona fa ny fantatro tsy fantatrareo".
Ary dia lazainy fa MAIZIN-TSAINA indray rehefa tsy hoe TSY MISY SAINA na koa hoe POAKATY
Ny an-dRanesta ianao o! Izao ve no mba fomba fitenin'ny Kristianina?
Dia aleo ihany ho'a mivavaka amin'ilay vodikinina etsy Talatamty
Miharena - 10/11/2017 19:33
Hamafisina mba hamohazana olona ny teny mety maherihery satria misy zatra manao izany dia rehefa tambatambazana dia vao mainka miaiky fa tena voafehiny hono ny olona miresaka aminy dia misitrika eo anatrehany dia tohizany ny resaka kivalavala fanaony eny rehetra eny.
Fitaizana izany ary izay indrindra no maha-Kristianina.
Hoy Jesoa moa indray mandeha izay hoe "ry taranaky ny menarana!!.." dia tsy hiaiky ve Endriny hoe mafy izany teny izany nefa ny Masina sady Mpanjaka no niteny izany tamin'ny olona teto an-tany mba hampahitsy azy sy hibebahany?
endriny - 13/11/2017 09:16
Tenin'ny olona tsy manan-kalahatra ny anao. Fomban'ny olona lany hevitra Ka ny sisa atao dia ilay manompa sy manozona. Saingy raha ny ompa tsy ahafaty. Ny ozona tsy mampihontsona. Fa izay vava nivoahany no ho menatr'olona.
Miharena - 13/11/2017 10:19
Efa mivily any amin'ny tsy izy ilay resaka fa tsy ny lohahevitra intsony no voatana Endriny rehefa sendra ny olona manohitra lava! Satria ny saimpantany no resahany fa tsy izay VOASORATRA aloha.
endriny - 18/11/2017 06:32
Mba mibilobiloka bibilika e
Miharena - 18/11/2017 18:35
Ny fanontaniana amin'ny lohahevitra milaza hoe
Aiza aza Andriamanitra amin'ity fahoriam=be eto Madagasikara ity kanefa ny fiangonana an'alin-kisa? no tiako voizina indray aloha satria ianao ihany no nanontany Endriny.
Andriamanitra dia any am-piangonana dia azonao tarafina daholo ny fiainan'ny Kristianina na mahantra na manankarena fa tsy nisy na dia iray aza tsy mandrotsaka rakitra ka raha hilaza ianao hoe fahoriam-be, dia izay olona tsy mivavaka no ory lava fa izay mivavaka mbola mahita fotoana andehanana mivavaka ary mahazo ny tandrify azy avy.
Ny tsy mivavaka mandroba (rehefa tsy manana) sy mamitaka (rehefa hampahantra ny hafa) ka ory ny firenena Malagasy noho izany.
Dia tadiavo ny vaha-olana raha hitanao fa Andriamanitra efa nametraka hoe : omena anao ny fahalalana ny fiainana sy ny fahaverezana, ka izay iray fidianao. Dia matoa ory dia nisafidy ny ho ory izany fa ny mpanara-dia an'Andriamanitra IZY ihany no miahy azy eny rehetra eny e!